ပြီးပြည့်စုံသောအမှန်တရားကို အနက်အဓိပ္ပာယ် —- | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ဗောဓိညောင်ရိပ် ရောက်ခဲ့စဉ်က-17
ပြီးပြည့်စုံသောအမှန်တရားကို အနက်အဓိပ္ပာယ် မဖော်ဆောင်နိုင်သေးသော
ယခုတလော ရေပန်းစားနေသော စကားလုံး လှလှလေးများသည် အမှန်တကယ် အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို လေ့လာသောအခါ ပြီးပြည့်စုံသော အမှန်တရားကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဥပမာ — “လူ့အခွင့်အရေး” “ပွင့်လင်းမြင်သာထင်သာမှု”
အများသူငါသည် ပွင့်လင်းမြင်သာထင်သာမှုကို တောင်းဆိုသကဲ့သို့ ဖြစ်လာကြသည်။ အမှန်တော့မူ ပွင့်လင်းမြင်သာထင်သာမှုကို လူတိုင်းတောင်းဆိုခြင်းငှာ မအပ်ဟု ယူဆရမည် ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပွင့်လင်းမြင်သာထင်သာမှု အားလုံးကို မှန်ကန်စွာ နှလုံးသွင်းနိုင်သော အရည်အချင်း ရှိပါသလား? ဆိုသော မေးခွန်း ရှိနေသည်။ အချို့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာထင်သာမှုကို ဖော်ပြသောအခါ မှန်ကန်စွာ နှလုံးမသွင်းနိုင်ချေ – ထိုအခါ စည်းရုံးရေးများ ပျက်ပြားပြီး ကမောက်ကမ ကိုးလို့ကန့်လန့် ဖြစ်တတ်သည်။
ထို့ကြောင့် နှလုံးသွင်းနိုင် နားလည်နိုင်သော အသိုင်းအဝိုင်း၌ ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာမှုများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ နှလုံးမသွင်းနိုင် နားမလည်နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်များအား ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာမှု ပေးခြင်းသည် အကျိုးမဲ့ရာ ရောက်နိုင်သည်။ ယခုအခါ မှန်ကန်မှုနှင့် အကျိုးရှိမှုသည် လွန်စွာ အရေးကြီးနေရာ အကျိုးရှိရာကိုသာ လုပ်ဆောင်ရပေလိမ့်မည်။ အကျိုးမဲ့ ဖြစ်သွားသော ကိစ္စများအား လုပ်ဆောင်ရန်မသင့်ချေ။
ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာ အပ်ပါသည်ဟု တောင်းဆိုပင် တောင်းဆိုငြားသော်လည်း အမှန်တကယ် ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာအောင် လုပ်ဆောင်ပြသောအခါ နားလည်မှု မရှိခြင်း၊ နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် စည်းရုံးရေး ပျက်ပြားခြင်း၊ အကျိုးမဲ့ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာ ဆိုသောစကားလုံးကို အပြည့်အဝ မတောင်းဆိုပါနှင့် ထို့အတူ လူ့အခွင့်အရေးကိုလည်း အဓိပ္ပာယ် မှားယွင်းစွာ မတောင်းဆိုပါနှင့် – ယင်းတို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော အမှန်တရားအား ဖော်ဆောင်နိုင်သော အနက်အဓိပ္ပာယ် မရှိကြောင်း လက်တွေ့လေ့လာသောအခါ သိရသည်။
“လူ့အခွင့်အရေး” ” လူ့အခွင့်အရေး” ဟု တောင်းဆိုရင်း တောင်းဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များက လေသံမာမာနှင့် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောဆိုတတ်လျှင် အခြားသောလူများသည် အခွင့်အရေးများ ပိတ်ပင်သွားတတ်သည်ကို သတိပြုရမည် ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ ထို့အတူ ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာ သင့်ပါသည်ဟု့ တောင်းဆိုသဖြင့် ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာမှုများ ပြသောအခါ မကြည့်တတ်၊ မရှုတတ်၊ နှလုံးမသွင်းတတ်၊ အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း မပေါ်ပေါက်ဘဲ၊ အကျိုးမဲ့ရာ မဲ့ကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သော ခံစားမှုများလည်း ရှိတတ်သည်။
ထို့ကြောင့် မှန်ကန် ပြည့်စုံသော အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို မဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံး လှလှလေးများအား – ထာဝရ အမှန်တရားအဖြစ် တောင်းဆိုခြင်းငှာ မအပ်ကြောင်း ရေးသားရပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုလျှင် အားလုံးဟာ လူဖြစ်သည်ကို သတိထားရမည်ကဲ့သို့ – ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာ ပါသည်ဟူသော တောင်းဆိုချက်၌ ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာ လာသောအခါ အမှန်တကယ် နားလည်ပေးနိုင် ပါသလား? နှလုံးသွင်းနိုင်ပါသလား? သဘောပေါက်နိုင်ပါသလား? အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်းကို ခံယူတတ်ပါဟူ သလား? မေးခွန်းများသည် နောက်ဆက်တွဲ ပေါ်လာပါသည်။
“ပွင့်လင်းမြင်သာထင်သာ” “ပွင့်လင်းမြင်သာထင်သာ” ဟူ၍ အပြည့်အဝတောင်းဆိုရန် မသင့်တော်ချေ — ထို့အတူ “လူ့အခွင့်အရေး” ” လူ့အခွင့်အရေး” ဟူ၍ အပြည့်အဝ တောင်းဆိုရန် မသင့်တော်ချေ။ အခါအားလျော်စွာ “လူ့အခွင့်အရေး” ကပင်လျှင် “လူ့အခွင့်အရေး” ကို ဆုံးရှုံးစေသည်။ ထို့အတူ ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာ ဟူသော တောင်းဆိုချက်များက ပွင့်လင်း မြင်သာထင်သာမှုများကို နှလုံးမသွင်းတတ်၊ မပိုင်နိုင် မခံယူတတ် နားမလည်နိုင်သောအခါ မလိုလားအပ်သော အဓိပ္ပာယ်များ သက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးပါသည်။